ラン　ピャ　チェ: February 2010
Television and Politics ရုပ်သံနှင့် နိုင်ငံရေး
မောင်ဝံသ ။ ။ဘီဘီစီသည် ၁၉၃၆ တွင် လန်ဒန်ဒေသတစ်ဝိုက်အတွက် ရုပ်မြင်သံကြား စတင်လွှင့်ထုတ်ခဲ့သည်။ အလက်ဇန်ဒရာနန်းတော်မှ ၂ နိုဝင်ဘာတွင် စတင်လွှင့်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ တယ်လီဗေးရှင်းခေါ် ရုပ်မြင်သံကြားတို့သည် လူတို့၏ ဘ၀များအပေါ် တစ်စတစ်စလွှမ်းမိုးလာခဲ့ရာ နိုင်ငံရေးဘ၀များသည်လည်း ရုပ်သံနှင့် ဆက်စပ်လာခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးသမားများသည် ပြည်သူလူထုနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ ဆက်ဆံရသကဲ့သို့ ဖြစ်လာသည်။ ဟာရိုးလ်မက်က မီလန်(ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် ၁၉၅၇-၆၃)၊ ချားလ်ဒီဂေါ (ပြင်သစ်သမ္မတ ၁၉၅၈-၆၈) နှင့် ဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီ (အမေရိကန်သမ္မတ ၁၉၆၀-၆၃) တို့သည် ရုပ်မြင်သံကြားခေတ်၏ အကျိုးထူးကို ခံစားခဲ့ရသူများဖြစ်သည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၆၀ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် ကနေဒီသည် နစ်ဆင်ကို မဲအနည်းငယ်မျှအသာဖြင့် အနိုင်ရခဲ့ခြင်းမှာ ရုပ်သံတွင် နှစ်ဦးသားယှဉ်၍ စကားပြောကြရာ၌ ကနေဒီ၏ရုပ်သွင်သဏ္ဌာန်က နစ်ဆင်ထက် သာလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ကို ပရိသတ်များ မြင်တွေ့သွားကြ၍ဖြစ်သည်ဟု အဆိုရှိသည်။ ရုပ်သံမီဒီယာသည် တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ရာ ကမ္ဘာတစ်ခွင်မှ ဖြစ်ရပ်များကို မိမိအိမ်ထဲတွင်ထိုင်နေရင်း မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့လာကြရသည်။ ထိုအခါ နိုင်ငံရေးသည် အလွန်နယ်ကျဉ်းသွားသည်။ ပြည်သူအများကို လှည့်ဖြားရန်ခဲယဉ်းသော အနေအထားသို့ ဆိုက်ရောက်သွားသည်။ ၂၀၀၁ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်က အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ရှိ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အအုံ မျှော်စင်ညီနောင်ကို အကြမ်းဖက်သမားတို့က လေယာဉ်ဖြင့် ၀င်တိုက်ဖြိုဖျက်ခဲ့ပုံကို နိုင်ငံတကာရှိ လူထုပရိသတ်များက ဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေချိန်မှာပင် စောင့်ကြည့်နိုင်ခဲ့ကြသည်။
Sphere of Influence သြဇာနယ်ပယ်
SOI ဟူ၍လည်း အတိုကောက်ခေါ်ဝေါ်သည်။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွင် နယ်မြေတစ်ခု သို့တည်းမဟုတ် ဒေသကြီးတစ်ခုအပေါ် နိုင်ငံတစ်ခု သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ယဉ်ကျေးမှု၊ စီးပွားရေး၊ စစ်ရေး သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးအရ သြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ သြဇာခံနိုင်ငံသည် ဂြိုဟ်ရန်နိုင်ငံ (a satellite sate) သို့မဟုတ် လက်တွေ့သဘောအရ ကိုလိုနီတစ်ခု (de facto colony) အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ သြဇာနယ်ပယ်ထူထောင်ခြင်းကို စူပါပါဝါခေါ် အင်အားလွန်နိုင်ငံများ၊ အင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့် အလယ်အလတ် အင်အားရှင်နိုင်ငံများက ပြုလုပ်ကြသည်။ ထင်ရှားသော ဥပမာတစ်ခုမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီနှင့် စစ်အတွင်းတွင် ဂျပန်အစိုးရသည် ကိုရီးယား၊ မန်ချူးရီးယား၊ ဗီယက်နမ်နှင့် တရုပ်ပြည်နယ်မြေအချို့ကို ချုပ်ကိုင်ထားပြီး သြဇာခံနယ်ပယ်ကြီး ထူထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းတွင်မူ အင်အားကြီးနိုင်ငံများ စစ်အေးတိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲကြရာ၌ သြဇာနယ်ပယ်များ ထူထောင်ခဲ့ကြရာ အမေရိကန်သည် အနောက်ကမ္ဘာခြမ်း (western hemisphere) တွင်လည်းကောင်း၊ ဆိုဗီယက်တို့သည် အရှေ့ဥရောပတွင်လည်းကောင်း သြဇာလွှမ်းခဲ့ကြသည်။
(ရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာနယ် အတွဲ ၆ အမှတ် ၅ နှင့် အတွဲ ၅ အမှတ် ၄၇ တို့တွင်ပါရှိသည့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး ဝေါဟာရအဘိဓာန် မှ ပြန်လည်ထုတ်နုတ်ကူးယူဖော်ပြပါသည်)
Posted by Aye Nandar Aung at 3:02 PM0comments
Posted by Aye Nandar Aung at 12:16 AM0comments
" ဟာသသရုပ်ဆောင် ဦးဂျော်လီဆွေ " အသက် (၈၀) တွင် ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သည်။
ဟာသသရုပ်ဆောင် ဦးဂျော်လီဆွေ ဟာ ဒီနေ့ Feb 5th မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်
Feb 6th မှာ အသုဘ အခမ်းအနားကို နာရေးကူညီမှု အသင်းက ဦးဆောင်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်
အခမ်းအနားကို ဦးဂျော်လီဆွေ ၏ မိသားစု နဲ့ ရုပ်ရှင်လောကမှ မိတ်ဆွေအနည်းငယ်သာ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အများစုကအဲ့ဒိနေ့ည နေပြည်တော်မှာကျင်းပမယ့် အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲကိုရောက်ရှိနေကြတာ မို့ သရုပ်ဆောင်တော်တော်များများကိုမတွေ့ခဲ့ရပေမယ့်
ဆင်းရဲတဲ့ပြည်သူတွေဘက်က ရပ်တည်ပေးခဲ့လို့ အကယ်ဒမီ ပွဲ မှာ ဖိတ်ကြားခြင်းမခံခဲ့ရသူ ရုပ်ရှင်လောက မှ ရွံရှာစွန့်ပါယ်ခြင်းခံထားရတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော် မင်းသား ကိုကျော်သူ ကိုတော့ မရွံမရှာ ကိုယ်တိုင် အခေါင်းထမ်းနေတာ တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘဘ ဦးဂျော်လီဆွေ ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေ
Posted by Aye Nandar Aung at 4:46 PM0comments
Posted by Aye Nandar Aung at 9:53 PM0comments
Posted by Aye Nandar Aung at 9:25 PM0comments
ဂျပန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေအနေမကောင်းဘူး။ ဒါကိုစိုးရိမ်တဲ့ ဦးဇင်း ဟက်ပီးက သူနည်းသူဟန်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကို သစ်ဆန်းတယ်။ လူထုနဲ့ထိစပ်အောင်လုပ်တယ်။ လူထုခံစားချက် လူထု လက်တွေဘ၀ထဲကိုကွင်းဆင်တယ်။ ဒါကတော့ လူငယ်တွေနဲ့ ထိစပ်အောင် ဟစ်ပေါ့ကိုကိုယ်တိုင် သီဆိုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ လူတွေက အရက်ဘားတွေမှာခေါင်းနစ်ထားတာကိုသူမကြိုက်ဘူး။ ဒီတော့အရက်ဘားဖွင့်ပြီး အရက်ရောင်းတယ်။ အရက်ခွက်ကိုချပေးတိုင်း ငရဲကိုသွားမဲ့အရက် သောက်ပေတော့ လို့ဆုံးမလိုက်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ရိုးရာဘုရားစာတွေကခက်တယ်လူငယ်တွေနားမလည်ဘူး။ ဒီတော့အလွယ်နည်းနဲ့သူကတရားဟောပါသတဲ့။ သူကြောင့်လူငယ်တွေ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပြန်လည်စိတ်ဝင်စားလာတယ်။ အဟံဘန်းဒေသိသရေန ဆိုတဲ့ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ အသံနဲ့မစဘူး ။ အဟန်ဘန်းဒေကို ဟစ်ပေါနဲ့ စဖွင့်တယ်။ တီထွင်ရဲတယ်။ သူရဲ့ လူသားဆန်တဲ့ ချဉ်ကပ်မှုကြောင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားလာတယ်။ ဂျပန်တွေရဲ့ကောင်းတာတခုကတော့ ဒီဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ တီထွင်မှုကိုမရှုတ်ချ ကြဘူး။ တခြားဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကလည်း ဘယ်လိုလဲကိုယ်တော် တပည့်တော်တို့ ကိုပြစ်မထားနဲ့ နည်းပေးပါဦးလို့ အီးမေးလ်ကနေတောင်းခံလာတယ်ဆိုပဲ။ ဗုဒ္ဓသာသက်ရှိထင်ရှားရှိဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကိုယ်တော်ကို
အသုံးချ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ( Apply Buddhisim ) ထုးချွန်မှုနဲ့ဆုချမှာသေချာတယ်။
Posted by Aye Nandar Aung at 9:07 PM0comments
လမ်းမအ၀င်မှာ ဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထားကြတဲ့သူများကို အံ့သြမိပါရဲ့ ဗျာ။ ဒဏ်ငွေရိုက်မယ့်သူများလည်း အံ့သြမိပါရဲ့ ။
မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးက လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ ကိုကျော်သူရဲ့“ရှင်းတမ်း” ရေးသားချက်ကို အလေးအနက်ထား ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြပါဦး။ ဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထားသူတွေ ဒဏ်ငွေရိုက်မယ့်သူတွေပါ ဖတ်ရအောင်ပါ။
ကိုကျော်သူရဲ့“ရှင်းတမ်း” ရေးသားချက်ကို ကိုကျော်သူရဲ့facebook မှ ပြည်လည်မျှဝေဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း သိမြင်ပြောဆိုရေးသားတဲ့ ကိုကျော်သူကို အင်မတန် လေးစားရပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by Aye Nandar Aung at 12:19 AM0comments
နှစ် ၁၅၀၀ ကျော်က ဗုဒ္ဓ ကျောင်းတော်ကြီး ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့တွင် တူးဖေါ်တွေ့ရှိ
မောင်ရမ္မာ (နိရဉ္စရာ) ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ပေါင်စောင်ဂေါ် ခရိုင်တွင် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၁၅၀၀ ကျော်က တည်ဆောက်ခဲ့သော ဗုဒ္ဓ ကျောင်းတော်ကြီး တခုကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက်နေ့က မြေအောက်မှ တူးဖေါ် တွေ့ရှိသည်။
ကျောင်းတော်ကို ပေါင်စော်ဂေါ်မြို့မှ ၁၆ ကီလိုမီတာ အကွာတွင် တည်ရှိသော အော်မိုခါနာ မြို့နယ်ခွဲရှိ ဘိတောဂေါ်ရ် ကျေးရွာရှိ ရှင်ဘုရင် တပါးပါး နေခဲ့သည်ဟု ခန်းမှန်းရသော တောင်ကုန်းကို တူးဖေါ်စဉ် တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တူးဖေါ်ရာကို ဦးဆောင်သူ တဦးဖြစ်သည့် ရှေ့ဟောင်း ဦးစီးဌာနမှ ဒေါက်တာ ချာဟာနာ ဟူဆေ ဂျာဟန်က အဆိုပါ ကျောင်းတော်ကို အေဒီ ၆ ရာစုနှင့် ၇ရာစု အတွင်းက တည်ဆောက်ခဲ့သော ကျောင်းတော်ကြီး တခု ဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
၎င်းပြင် သူမက ကျောင်းတော်မှာ ရှေးခေတ် ကုန်ပိုင်း ကုန်သွယ်သွားလာရာ လမ်းတွင် တည်ရှိခဲ့သဖြင့် တိဗက်၊ ဘူတန်၊ နီပေါနှင့် အိန္ဒိယ ဘီဟာ တို့နှင့် ဆက်စပ်မူ ရှိကြောင်း ပြောသည်။
တူးဖေါ် တွေ့ရှိခဲ့သော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ အလွန်ကျယ်ဝန်းပြီး အခန်းများကို အုတ်များနှင့် တည်ဆောက်ထားသဖြင့် ယခင်က ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များကို အသိအမှတ်ပြုပြီး တည်ဆောက် ပေးခဲ့သည့် ကျောင်းတော် အဆောက်အဦး တခု ဖြစ်နိုင်သည်ဟု သူမက ခန်းမှန်း ပြောဆိုသည်။
၎င်းနေရာတွင် အဆိုပါအဆောက်အဦးမျိုး တည်ရှိမည်ဟု ရှေးဟောင်း ဦးစီးဌာနမှ ခန်းမှန်းထားခဲ့ပြီး ဒက္ကားမြို့ရှိ University of Liberal Arts Bangladesh ကျောင်းမှ ပါမောက္ခ ချာလာနာ ဟူဆေ ဂျာဟန်မှ ဦးဆောင်ပြီး အဆိုပါ ကျောင်းမှ နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသားများနှင့် သွားရောက်တူးဖေါ် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျောင်းတော်ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ ကပင် စတင်ရှာဖွေတူးဖေါ်နေခဲ့ရာ ယခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် အဆိုပါ အဆောက်အဦးကို စတင် တွေ့ရှိ ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုတွေ့ရှိခဲ့သော အဆောက်အဦးကို အေဒီ ၇ ရာစုအတွင်းက ပြုလုပ်သော အုတ်များဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး အာရှတွင် အကြီးဆုံး အဆောက်အဦးကြီး တခု ဖြစ်နိုင်သည်ဟု အဆိုပါ တူးဖေါ်ရေး အဖွဲ့က ခန်းမှန်းထားသည်။
ဒေသခံများကမူ ၎င်းနေရာကို ရှေးဟောင်းမြို့တော် အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန် အစိုးရကို တောင်းဆိုထားသည်ဟုလည်း သိရသည်။
အလားတူ အဆိုပါနေရာမှာ ရှေးဘုရင်များက တိဘက်၊ ဘူတန်၊ တရုတ်၊ နီပေါ၊ အိန္ဒိယ၊ ပါကိစ္စတန်နိုင်ငံများနှင့် စီးပွားရေးအရ ဆက်သွယ်ရာတွင် ဗဟိုဌာနချုပ်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သော နေရာလည်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟုလည်း ခန်းမှန်းပြောဆိုနေကြသည်။
ယခုတွေ့ရှိသော အဆောက်အဦးသည် ယခင်က ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံအတွင်း အာသံ၊ ကုစဘီဟ၊ မိန်နာမူတီ၊ ပါဟပူလ်၊ မော်ဟာစ်ထန်နော် ဒေသများတွင် တူးဖေါ်တွေ့ရှိခဲ့သော အဆောက် အဦးများနှင့် တူညီသည်ဟု သိရသည်။
ယခုတွေ့ရှိသော အဆောက်အဦးနှင့်အတူ တခြားအဆောက်အဦးဟောင်း ၁၂ ခုကိုလည်း တူးဖေါ်တွေ့ရှိထားသည်။
Posted by Aye Nandar Aung at 11:56 PM0comments
Posted by Aye Nandar Aung at 11:51 PM0comments
တောင်ကိုရီးယားရောက် မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ
Posted by Aye Nandar Aung at 10:20 PM0comments
" ခေတ်ဆန်သူသို့ "
သွန်သင်တာ မှတ်တော့ မနှေး။
ရှာရှာဖွေဖွေဖေါ်ပြပေးတဲ့ ကိုမျိူးချစ်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျမအမြင်ပြောရရင်တော့ ခေတ်ဆိုတာ ဆန်တက်စရာ မလိုပါဘူး။
ခေတ်ရေစီးကြောင်းဆိုတာ သူ့ဖာသာသူ အချိန်ကာလအလိုက် ပြောင်းလဲ
စီးဆင်းနေတာမျိူးပါ။ ရေစီးကြောင်းကိုဆန်မယ်ဆိုရင် အများနဲ့ဆန့် ကျင်သွားမယ်၊
မလိုလားအပ်တဲ့ ပင်ပန်းမှုမျိူးတွေလည်း ကြုံရမယ်။ အာလုံးအလယ်မှာ
ထူးထူးခြားခြား ကြောင်တောင်တောင်ကြီးလည်း ဖြစ်နေမှာပဲနော်။
ကျမလည်း ငယ်တုန်းကတော့ အူကြောင်ကြားပါပဲ။
ခေတ်ဆန်တာတွေ ခေတ်မီတာတွေကို ဂဃနဏမတွေးခဲ့မိဘူး။
ကျမရဲ့ အူကြောင်ကြားစိတ်ဓါတ်တွေ ပြောင်းသွားမယ့်နေ့ပေါ့။
ကျမတက်နေတဲ့ ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းကျောင်းက ပြင်သစ်လူမျိူးဆရာက
ဖက်ရှင် အကြောင်းနဲ့ပါတ်သက်ပြီး စာသင်ရင်းနဲ့ ဒီအတန်းထဲမှာလည်း
သူ့နေရာဒေသ၊ရာသီဥတုနဲ့ အချိန်ကိုလိုက်ပြီး ဖက်ရှင်ကျကျ ဝတ်တတ်တဲ့
သင်တန်းသူဆိုလို့ တယောက်ပဲရှိတယ် လို့ပြောတယ်။
အားလုံးက သူလား? ငါလား? ပေါ့လေ။
အဲသည်အချိန်မှာ ဆရာညွှန်ပြလိုက်တဲ့ ကောင်မလေးက ဘယ်သူမှထင်မထားတဲ့
တန်ဖိုးသိပ်မကြီးလှတဲ့ သာမာန်ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ချည်သားblouseလေးတွေဝတ်တတ်ပြီး
လွယ်အိတ်လွယ်ပြီး သင်တန်းလာတက်တဲ့ ကောင်မလေးပေါ့။
ဒါနဲ့ ကျမကလည်း စွာကျယ်တို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဆရာ့ကို စောဒကတက်မိတာပေါ့နော်။
သည်မှာတင် ဆရာကရှင်းပြတယ်လေ၊ ပူအိုက်လွန်းတဲ့ ရန်ကုန်နွေခေါင်ခေါင်မှာ
ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ပြီး သင်တန်းလာတဲ့သူတွေ၊ ပြေးလွှားတွန်းထိုးပြီးတက်စီးရတဲ့ ဘတ်စ်ကား
နဲ့ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေ၊အမြင်မတော်တဲ့ ခွဲကြောင်းရှည်စကတ် ခပ်ကျပ်ကျပ်ဝတ်လာတဲ့သူတွေ၊
ပခုံးမှာသာချိတ်ထားရင် လက်နှစ်ဖက်စလုံးအားပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် လမ်းလျှောက်နိုင်ပါလျက်နဲ့
သက်သက်မဲ့ လက်ထဲမှာ အလုပ်ရှုပ်ခံ၊ဈေးကြီးပေးရပြီး၊ စာအုပ်နဲ့မင်တံလောက်ကလွဲလို့ တခြားဘာမှ
ထည့်လို့မရတဲ့၊ လွယ်အိတ်မဟုတ်တဲ့ ဖိုင်တွေတကိုင်ကိုင်နဲ့ သင်တန်းလာတက်တဲ့သူတွေနဲ့နှိုင်းစာရင်
အဲသည်ကောင်မလေးကို ကြည့်ရတာအတော့်ကို လွတ်လပ်ပေါ့ပါးပြီး၊နေသာထိုင်သာရှိမယ့်ပုံပေါက်တယ်တဲ့။
တကယ်ဆို နည်းပညာတွေ၊ အတတ်ပညာတွေတိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးကို အမှီလိုက်နိုင်အောင် သင်တို့လည်း
ပြင်သစ်ဘာသာစကားကို ရည်ရွယ်ချက်အမျိူးမျိူးနဲ့ လာသင်ကြတာမဟုတ်လားတဲ့။
စိတ်ဓါတ်တွေက ခေတ်ကိုမီနေပြီပဲ၊ ဝတ်စားဆင်ယဉ်မှုက ဘာလို့ခေတ်ကိုဆန်ချင်ကြရတာလဲတဲ့...
ခေတ်ကိုဆန်ခြင်းဖြင့် မလိုလားအပ်တဲ့ဆိုးကျိူးတွေပဲ ရနိုင်ပါတယ်တဲ့။ အထူးသဖြင့် အမျိူးသမီးများ
ခေတ်ဆန်လွန်းရင် အန္တရာယ်ကို ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပါပဲတဲ့။
ဆရာ့ရဲ့သရော်သိုလို လှောင်သလိုလို အထင်သေးမှုလည်း ပါနေသလိုလို မခိုးမခန့်အကြည့်အောက်မှာ အားလုံးလိုလိုဟာ
အဖိုးတန်ဂျင်းဘောင်းဘီကို လောလောဆယ်မှာ ထမီစုတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် လဲပစ်လိုက်ချင်စိတ်၊ စကတ်အကွဲကြီးတွေကို
ကမန်းကတမ်း အပ်ချည်နဲ့အပ်ပြေးဝယ်ပြီး သီချုပ်လိုက်ချင်စိတ်ဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်။
အိမ်ကလူကြီးမိဘတွေကပြောရင် လူကြီးတွေက ခေတ်နောက်ကျနေပြီ၊ ခေတ်ချင်းကတူတာမဟုတ်တော့ဘူး....စသဖြင့်
ဆင်ခြေအမျိူးမျိူးပေးပြီး နားမထောင်ခဲ့တဲ့ ကျမဟာ တိုင်းတပါးလူမျိူးခြားက ပြောလိုက်တော့မှ နာရကောင်းမှန်း သိခဲ့ရတယ်။
အခုဆိုရင် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ အကြောင်းအမျိူးမျိူးနဲ့ နေထိုင်နေကြတဲ့ မြန်မာအမျိူးသမီးငယ်လေးများကိုလည်း
ကျမလိုမျိူး နိုင်ငံခြားသားက ပြောလာတော့မှပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိထားမိတဲ့ အနေအထားမျိူး၊ ခံစားမှုမျိူး မကြုံစေချင်ပါဘူး။
ဟိုပေါ်ဒီပေါ် ပေါ်တယ်ဆိုတာ ခဲရာခဲဆစ်၊ကြံကြံဖန်ဖန်၊နက်နက်နဲနဲ တွေးပြီးရှက်ရတာမျိူးမဟုတ်ပါဘူးနော်၊
ကလေးအတွေးနဲ့တင် ရှက်မယ်ဆိုရင် ရှက်လို့ရပါတယ်။
လွယ်လွယ်နဲ့တိုတိုပြောရရင်တော့ ခေတ်ဆန်ဖို့မလိုပါ။ ခေတ်မီဖို့သာ လိုပါတယ်။
Posted by Aye Nandar Aung at 8:38 PM0comments
16315069 Poems of Conscious Vol 1
Posted by Aye Nandar Aung at 8:10 PM0comments
ပုဂံနန်းတော်(ပုဂံတပ်)တံတား ကျပ်သိန်း (၂ဝဝ) ကျော်ကုန် တည်ဆောက်
မန္တလေးတိုင်း၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ ပုဂံတပ်ကျေးရွာအနီး ပေ(၁၂ဝ)အရှည်ရှိ ပုဂံတပ်တံတားမှာ အသွားအလာ များပြားပြီး ပျက်စီး ယိုယွင်းနေသဖြင့် မန္တလေးမြို့ အနောက်ခင်မ ကန်တိုက်မိုးတား ဆရာတော် (သ၊စ၊အ)ဓမ္မာစရိယ (ဝဋံသကာ) ဒီဃနိကာယ ပါဠိပါရဂူ၊ မဟာ ဓမ္မ ကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ အဂ္ဂမဟာ ဓမ္မကထိက ပိဋကတ္တယပါရဂူ နိုင်ငံတော် ဗဟိုသံဃာ ဝန်ဆောင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒန္တသူရိယဘိဝံသ ဦးစီး၍ ကျပ်သိန်း (၂၅ဝ)ကျော် ကွန်ကရစ် အုတ်တံတား အဖြစ် ပြုပြင် တည်ဆောက်လျက် ရှိသည်။ တံတား တည်ဆောက် ရာတွင် ခမည်းတော်ကြီး ဦးဌေး၊ မယ်တော်ကြီး ဒေါ်သောင်း တို့ကို ရည်စူး၍ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသူရိယဘိဝံသက ကျပ်သိန်း(၅ဝ)၊ ဦးမြင့်သန်း+ ဒေါ်ဝင်းဝင်းဌေး (မြန်မာသံလွင် သံမဏိ သံရည်ကျိုစက်ရုံ)မိသားစု စက်မှုဇုန်မန္တလေးမှ ကျပ်သိန်း(၂ဝ)၊ ဦးနု-ဒေါ်ခင်မာကြူ မိသားစု(ကြည့်မြင်တိုင်) ရန်ကုန်မှ ကျပ်(၁ဝ)သိန်း အပါအဝင် အလှူရှင်များက စုပေါင်း ပါဝင် လှူဒါန်းငွေဖြင့် တည်ဆောက်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါတံတား ကောင်းမွန် သွားပါက ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မတ္တရာမြို့နယ်၊ ကျွန်းပိုင်း ကျေးရွာပေါင်း(၂ဝ)ကျော်မှ ကျွန်းကိုင်း တောင်သူ မိသားစုများ မန္တလေးမြို့သို့ သွားလာ ဆက်သွယ်မှု၊ သီးနှံ ကုန်စည်များ သယ်ယူ ပို့ဆောင်မှု လွယ်ကူ လျင်မြန် လာမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မန်းကြီး ဟံသာဝတီ | HANTHAWADDY
Posted by Aye Nandar Aung at 6:56 PM0comments